Su'aal Cessna U 206 G de Rikoooo
Bilood 11 4 todobaad ka hor #1121 by CL38
Anigu ma bilaabi karno Cessna U206G Qaboojiyaha iyo Maqalka.
- Taarikada Fuulku waxay doortaan: Dhammaan
- Fuel: furan
- Xakamaynta fiilooyinka: 100%
- Bedelka battanka: on
-Bishii hore: on
hargabku ma jeedo
user soo socda (s) ayaa sheegay in Waxaad ku mahadsan tahay: Roipkox
Bilood 11 2 maalmood ka hor #1142 by Camwin128
Haddii aad ku jirto FSX. Riix Ctrl + E si aad u bilowdo gawaarida gawaarida. Xakamaynta degdegga ah.
Bilood 10 2 todobaad ka hor #1171 by CL38
Waad ku mahadsantahay macluumaadkaaga laakiin waa habka gacanta lagu qaboojiyo Qabow iyo Maqal ah oo aan raadinayo.
CTRL + E waa mid ka mid ah mabaadi'da aasaasiga ah ee FSX iyo P3D.
Time si ay u abuuraan page: seconds 0.206